Ireo andrim-panjakana tanora dia mampitabataba ny herisetra satria ny 'fikolokoloana' dia tena fanararaotana tokoa? : Martin Vrijland
Ireo andrim-panjakana tanora dia mampitabataba ny herisetra satria ny 'fikolokoloana' dia tena fanararaotana tokoa?
Filed in NEWS ANALYZES	by Martin Vrijland	amin'ny 4 Novambra 2019	• 11 Comments
Minisitra Sander Dekker (fantatrao ireo mpitsara ireo, izay afaka mahita ny rehetra ho vinantolahim-boafidy tsara, fa angamba amboadia amin'ny fitafian'ny ondry) hoy ny tohina noho ny hamafin'ny zava-nitranga teo amin'ny fikarakarana ny tanora. Tsara, Sander, angamba izany satria i George Orwell dia efa nanazava zavatra tao amin'ny bokiny 1984 feo vaovao izany. Ao anatin'io boky io dia manazava fa ny teny toa ny 'fikolokoloana' dia mety hidika ny fanararaotana ary maro kokoa ny karazana horohoro. Efa nataoko an-tsaina fa miaraka amin'ireo rakitsary miafina ao anaty toerana «fikarakarana tanora» ao 2013 (jereo ny sary eto ambany). Ny talen'ny andrim-panjakana tao Heerhugowaard dia voaroaka noho ireo firaketana an-tsoratra ireo ary namboarina kely ny fitsipika, saingy mazava ho azy fa natao voalohany indrindra hanakanana ireo mpanamory ivelan'ny varavarana bebe kokoa amin'ny ho avy.
Ity horonantsary ity dia manome fahatakarana vitsivitsy momba ny habibian'ny andrim-panjakana toy izany. Nataoko ity firaketana ity rehefa nifarana tamin'ny andrim-panjakana iray ny zanako vavy iray namako. Satria manana tazo izy, niaiky izahay ary afaka maka sary amin'ny fakantsary miafina. Tamin'ny fakana an-tariby an-telefaona, izay nafeniko tao am-pandriana, dia nahavita nandrakitra ireo firaketana ny fanararaotana ny mpifanolobodirindrina aminy (amin'ny alàlan'ny mpiasan'ny andrim-panjakana). Ho henonao izany amin'ny faran'ny lahatsary. Ao amin'ny tapany voalohany amin'ilay horonantsary dia mitantara ny tsy maintsy nitaterany ny hetsika rehetra nataony tany ivelan'ny varavarana izy. Fampihorohoroana madio ho an'ny zatovo izay tsy misy olana amin'ny tadin'izy ireo, fa manana fotoana sarotra ananan'ny tanora na amin'ny toeran'ny trano. Ary mazava ho azy fa kitapo fotsiny sy tendron'ny efitra lamba izany. Ny tantara efa nolazaina tamiko tamina mponina taloha (()) ity andrim-panjakana ity dia tsy eto amin'ity tontolo ity fotsiny! Horohoro tanteraka ary tsy misy mahita! Zaridaina milamina sy trano milamina, fa ao anatiny kosa dia ny afobe eto an-tany.
Tany aloha ianao dia navela ho zokiolona ara-dalàna; ankehitriny dia voahidy ao amin'ny sela mitoka-monina ianao. Raha manidy anao any an-trano ny ray aman-dreninao dia hahazo ny lohateny ratsy fitsaboana izy ireo; raha toa ny mpiasa mpiasan'ny tanora dia manome anao "fanazaran-tena fanaintainana" (vakio: mitsofoka tsirairay) na flickers ao amin'ny sela mitokana, izany fanabeazana sy "ilaina". Tsara ve izany tampoka? Aiza isika no nifarana!?
Ny feon'ny fieritreretan'ireo mpiasan'ny fikarakarana tanora ireo dia toa natao fanodinkodinana handoa trosa na hofan-trano ary ny an'ny zanak'izy ireo Nike farany. Toa ny hoe ny karama mahazatra nefa tsy miova dia mampangina ny feon'ny fieritreretana. Ny feon'ny fieritreretan'ny mpiasa mpitaiza antonony antonony dia mifanena amin'ny foto-kevitry ny 'befehl ist befehl' Mety hahita izany fihetseham-po izany ianao ary tena maharesy lahatra fa misy be dia be koa ny olona manana fo marina momba an'io raharaha io. Miala tsiny fa toa tsy noho ny tsy fisian'ny herisetra be loatra amin'ny mpiasan'ny fikarakarana tanora. Nahazo fitarainana maro (fanarenana: tiako be) ny fitarainana momba ny fikarakarana ny tanora. Betsaka ny azo lazaina! Amin'izay lafiny izay, voatery nanipy ny famaky aho mba hanomezako manokana an'ireo fitarainana ireo. Be loatra sy mampihetsi-po be loatra ilay izy!
Raha ny hevitro dia tsy fanahirana ny fikarakarana ny tanora. Izahay dia mitory ny toby fanabeazana mahatsiravina izay tsy jerena ny olombelona rehetra. Tsia, tsy miatrika izany isika satria tsy hitanay. Mitranga ao anaty Sink; ao ambadiky ny varavarana mihidy sy ny zaridaina milamina. Ny fanakatonana ireo tanora adolantsento izay tsy mety mandeha ny tranony ary mitantana ireo antsoina hoe "stimitation pain," anisan'izany ny mihidy amin'ireo sela mitokana dia ratsy kokoa noho ny Moyen Âge. Avy eo, ny minisitra iray niaraka tamin'ny solomaso sy ny fehiloha tsara sy ny akanjony dia afaka nilaza fa "nanaitra" izy, fa ho ahy dia tsy inona izany fa ny amboadia amin'ny fitafian'ny ondry izay miteny hoe 'beh'. Ny fikarakarana ny tanora rehetra dia lisitry ny andrimpanjakana izay mahazo vola be amin'ny "serivisy" ary manangona vola manodidina eny an-damosin'ny ankizy marefo tsy manan-tsiny. Lasa tena indostria tena izy io!
Izaho dia hiteny hoe: I Sander Dekker dia mandany andro iray ao amin'ny sela tsara tarehy (satria tsy misy efitrano intsony intsony. Misy ny fehezan-kaofin'ny PIN ao amin'ny "andrim-panjakana") amin'ny institiota "fikolokoloana". Asio fehiloha sandratra na tendany tsara handinihana hanipy ao amin'ny sela mitoka-monina mba hangatsiaka (vakio: reraka ary diso tanteraka ao anaty gorodona). Te-hahita anao indray izahay amin'ny akanjo tsara tarehy misy fatoranao. Jereo raha mbola misy manao chats.
Mety hanontany tena ianao hoe: Hafahafa ve ny fisian'ny herisetra mihatra amin'ny mpiasa "fikarakarana" amin'ny tanora na hafahafa hafahafa fa toa nanjavona ny feon'ny fieritreretany ireo mpiasa ireo? Fa inona ny raharaha any Holandy, ilay firenena izay samy mifampitantana avokoa ny rehetra mba hanamarinana ny fitondran-tena ratsy ary hampiakatra ny tsy fahalalam-pomba? Iza no manana guts ny fieritreretana ary hamarana ny horohoro toy izany? Iza moa iza? (Jereo ihany koa ireo video ao amin'ny fanehoan-kevitra)
Lisitry ny rohy loharano: nu.nl
Fanambaràna: Fanadihadiana momba ny psychiatrie marika Mark Rutte sy Sander Dekker ao amin'ny raharaha Anne Faber
Vonoina ny zazakely ary ianao ihany no mahazo 2 taona toy ny fanambarana nataon'i Yasmine M. amin'izao fotoana izao
Mitanisa ny isan'ireo olona misafotafosa izay miteraka olana?
Mihamaro hatrany ny olona miasa amin'ny fanjakana, hany ka nanjavona ny fanakianana ny fanjakana
Tags: fanaterana, Dekker, Featured, Heerhugowaard, institiota tanora, fikarakarana zatovo, fanompoam-pivavahana, lakolosy vonjy maika, Sander, institiota momba ny fahasalamana
4 Novambra 2019 ao amin'ny 05: 26
4 Novambra 2019 ao amin'ny 06: 35
INDRINDRA: AZA hanakatona ny hafatra amin'ny lisitry ny hafatra ny Facebook satria hitan'izy ireo fa "tsy misy dikany" (mamaky sivana ny fanjakana), koa zarao amin'ny mailaka manokana, WhatsApp na inona na inona!
Ny tena ratsy indrindra dia ny ankamaroan'ny olona izay tsy mampaninona ny tsy sahy mizara lahatsoratra ... satria matahotra sao dia ho menatra azy ireo ny hafa fa tsy mahatsapa fa mahamenatra ny tenany.
4 Novambra 2019 ao amin'ny 06: 54
Hitantsika imbetsaka ny fomba nanaovan'ireo régime izay lazaina fa miady amin'ny tsy rariny ny mitovy tsy rariny. Handroaka ny Nazia ny Allies, fa nanapoaka baomba an'i Dresden teo amin'ny fatotra indrindra an'i Winston Churchill rehefa vita ny ady. Ny Nazia dia mamono olona tsy amin'antony, fa nanao toy izany ihany koa ny "mpamonjy". Ankoatra ny fanontanian'ny hoe iza no tena mamatsy vola an'i Adolf Hitler (tsy ilay vola sionista avy any Etazonia ve?): Tsy nitsahatra hatrizay ve ny Nazism? Sa ve ny nanjavonan'i Adolf Hitler avy any an-toerana no tena fanombohan'ny nananganana indray ny fascisme tamin'ny palitao demokratika mamy faran'izay mamy?
Soa ihany fa mbola misy ny sary .. izay no lasa taorian'ny ady (jereo ny befehl ist befehl tifitra ireo "mpamonjy").
Ny toby fampianarana sovietika indray no tsy fantatra intsony amin'ny hoe gulag ankehitriny ary ny toby fitanana Nazi dia tsy manana izany fomba masiaka izany. Antsoina hoe GGZ na toeram-pitsaboana ho an'ny tanora izany ankehitriny. Izahay dia lasa somary mangetaheta kokoa ary mametraka ny zava-drehetra amin'ny palitao vaovao miresaka Orwellian vaovao, mba tsy hisy hanelingelina ny feon'ny fieritreretana. Ny varavarana fidirana aloha dia milamina ary milamina ny zaridaina ary ny varavarana finday dia manana ravaka tsara sy fanidiana farango.
4 Novambra 2019 ao amin'ny 06: 59
4 Novambra 2019 ao amin'ny 07: 07
Ny isan'ny maty dia tamin'ny fomba ofisialy 25 arivo, saingy izany dia miorina amin'ny foto-kevitry ny Churchill "Ny tantara dia nosoratan'ny mpandresy"
Raha ny marina dia miresaka olona an-jatony ho an'arivony isika no maty taorian'ity daroka baomba ity. Na izany aza, mazava ho azy indray dia nanambara fa ny neo-Nazi no miantso isa marobe. Ny mpandresy dia mamerina nanoratra ireo bokikely fitantarana tantara (ary mazava ho azy fa mivoaka.
Izy io dia fahitana ny onjan-drano lehibe iray tamin'ny oram-baomba manondraka zezika iray ary nipoaka ny doro lehibe izay nandripaka izay rehetra velona. Fanamarihana: efa vita ny ady!
4 Novambra 2019 ao amin'ny 07: 27
Maninona no apetraka eto ambony aho?
Ny fanehoana fa mbola miaina ao ambanin'ny fitondrana tsy mety isika; fitondrana izay mamolavola olona ary mametraka azy ireo amin'ny toby. Ireo toby ireo dia toa tsara tarehy fotsiny, manana ny anaram-boninahitra andrim-panjakana hikarakarana karama ary ny mpiasa dia manana karama milamina, volkswagen milamina ary zaridaina voaroaka milamina.
Ny feon'ny fieritreretan'ny mpiasa dia voageja amin'ny karama ary mizara ny tantara momba ny asa any amin'ireo fety sy fety na amin'ny milina kafe.
4 Novambra 2019 ao amin'ny 07: 58
Grappemaker dia manana tsirony an'io taorian'ny psyop Wiersum
ary raha miahiahy i Dresden ... tsara loatra ny miahiahy tsy mahazo mandositra azy io
4 Novambra 2019 ao amin'ny 16: 05
Isaky ny misy ilay antsoina hoe olana mitranga izay mahatonga anao hanao fihetsiketsehana mahery setra amin'ilay antso hamahana, hamahana na hanelanelana. Avy eo, mihamahazo vahana kokoa ny lalàna. Fanampiana sy fahefana bebe kokoa ho an'ny mpiasan'ny fikarakarana tanora. Manakataha fotsiny ary manaova izay lazaina na ara-drariny na tsia. Amin'ny alàlan'ny fanararaotana tsy maloto sy tsy matoky tena, ny olona dia voatery amin'ny fifandraisany amin'ny client. Ianao dia manatona sy itondrana hazo lava toy ny voafonja amerikanina mitokana. Tena zavatra ianao amin'ny toe-javatra toy izany. Fiarahamonina mahafinaritra? Haha eny befehl ist befelh dia arahana tsara amin'ny rindrambaiko, misy fandavahana azy avy heverina ho avo be. Ny "tsy manaitra" dia ny "bugs" ao amin'ny rafitra fanaony. Matetika izy ireo dia tsy manana zanaka, fa te hiaraka amin'ilay "zandriny" araka ny boky iray. Toa tsy mitovy vokatra mihitsy ve izy io? Mila mihazona azy io "amin'ny elanelam-potoana mety" raha tsy izany dia tsy azo antoka intsony ny fiarovana ny ankohonanao. Tahaka ny gadra tena mpigadra tena izy. Tsy fantatrao mihitsy ve?
Hey Martin ary mamy indray thx ho an'ny fahalalana. Misaotra nizara ny fahalalanao, nankasitraka indrindra. Indraindray aho mizara ny lahatsoratrao. Fa mihevitra ny olona ho adala aho. Na manahy momba ny lohahevitra sasany ny olona Na manangona zavatra hafahafa hafahafa ianao. Tsy maninona izay halehiben'ny faharanitan-tsaina, mandra-pahatongan'ny fisavoritahana fahatsiarovan-tena avo indrindra manomboka ny milalao na midina amin'ny fasika ny loha. Na mivadika aminao. Lasa nifamaly momba izany mihitsy aho rehefa niresaka ireo lahatsoratra ireo.
Aza mikasika ny paosin'izy ireo satria hikasika azy ireo ianao. Afaka mandoa vola ve ianao?
Tahaka ny nanantonan'ny olona mpamosavy iray dia tokony ataonao amin'ireo karazana olona manararaotra ny tanora.
4 Novambra 2019 ao amin'ny 18: 43
Valiny tsara avy aminao. Eny, sarotra ny manantena ny hamoaka jet avy amin'ny olon-tsotra satria samy natahotra avokoa izy ireo. Manararaotra araka izay azo atao izy ireo amin'ny alàlan'ny fanarahana ny tsindry vondrona amin'ny alàlan'ny antsakany sy andavany ireo laharam-pehin-kevitra napetraky ny vahoaka. Ny Holandy, Madurodam, dia ratsy kokoa noho ny GDR teo aloha. Eto dia milalao kokoa izy ireo. Ny aretina any Holandy dia tsy mana-jaza, mihetsika, mangina, sns. Ary raha sendra misamboaravoara ianao dia mahita lozam-pifamoivoizana iray, mazava ho azy fa tarihin'ireto olon-dratsy tsy fantatra ireto. Satria tsy mahery fo amin'ny gripa ny mahery fo. Satria ny toetoetran'ny zazalahy dia tsy maintsy arahana amin'ny fomba rehetra. Voarara ny fanafoanana ny sata mifehy azy io. Tsy maintsy arahina ny script.
4 Novambra 2019 ao amin'ny 19: 10
Izany rehetra izany dia tsy ho miafina intsony. Raha mandalo ao amin'ny efitrano ny lalàna izay azon'ny tsirairay, fianakaviana, namana na mpifanila trano azo antsoina hoe olona mety hisafotofotoana, dia tonga dia mitondra anao miaraka ny mpitsabo na ny mpitsabo aretin-tsaina.
Misaotra an'ireo Thijs H. PsyOp, Ruinerwold PsyOp sy olona maro hafa tamin'ny taon-dasa.
Io no fomba anadiovanao ireo mpanohitra raha ny hafa no mahazo aina tsara amin'ny maha mpiasa GGZ (mpiambina vaovao).
4 Novambra 2019 ao amin'ny 07: 50
Eny, marina fa miaina ao anaty jadona mangina sy malefaka isika. Ny fanovana ny fitondràna indray raha vao azo dia afaka miaina any amin'ny firenen'izy ireo malalaka ny vahoaka raha tsy manana ny laharam-pahamehan'izy ireo izy ireo, efa ela velona.
« Ny lavaka mainty nolalaovan'ny NASA dia tena plasmida misy ranona
Boky vaovao Martin Vrijland 'Ny zava-misy araka ny fahitanay azy dia efa vonona ho amin'ny fandefasana! »
Total visits: 13.777.313
guppy op Nanomboka ve ny fanafihana? Ny psycholance dia efa nomena ilay hazavana maitso ao 2018 miorina amin'ny raharaha Els Borst / Bart van U.
Zonnetje op "Tsy mino ny New World Order" i Robert Jensen: manaporofo fa mpanohitra i Jensen.nl
Chekinah op Nanomboka ve ny fanafihana? Ny psycholance dia efa nomena ilay hazavana maitso ao 2018 miorina amin'ny raharaha Els Borst / Bart van U.
Zandi Eyes op Ny satroboninahitra satroboninahitra sy ny lalao eo amin'ny fanjakana sy ny heloka bevava proxy (mpisolovava Meijering mifanohitra amin'i Plasman)
Mifandraisa anjara amin'ny 1.681 hafa